Wax Ka Ogaw: 5-Atariisho Bollywood-ka Ka Tirsan Oo Aadan Ogeyn Filimada Koonfur Hindiya Ay Sameeyeen (+Sawiro) – Filimside.net
Wax Ka Ogaw: 5-Atariisho Bollywood-ka Ka Tirsan Oo Aadan Ogeyn Filimada Koonfur Hindiya Ay Sameeyeen (+Sawiro)
Waxaa jiro atariishooyin caanka ah Bollywood-ka ka oo aan ageyn filimada koonfur hindiya ay sameeyeen waxaa liiskaan ku arki doonta atariishooyin bollywood-ka awood ku leh.
Qaar ka mid ah atariishooyinka Bollywood-ka inta ay kusoo biirin bollywood-ka waxay sameeyaan filimaan koonfur Hindiya ah halka kuwa qaar ayagoo magac leh halkoo filim koonfur hindiya sameeyaan waxaan liiskaan kusoo qaadan doona atariishooyinka waqtigaan bollywood-ka ka tirsan oo aadan ogeyn filimada koonfur hindiya ay sameeyeen.
Fadlan hoos kaga bogo 5-atariisho bollywood-ka ka t oo aan ogeyn filimada koonfur hindiya ay sameeyeen.
1.Sonaksi Sinha: waxay ka mid tahay atariishooyinka ugu awooda badan Bollywood-ka waxayna sanadii 2015 u wareegtay koonfur Hindiya iyadoo Super Star Rajinikanth la sameysay filimka Lingaa.
oo ka mid ah atariishooyinka ugu jiliinka wanaagsan bollywood-ka waxay sanadii 2011 sameysay filim koonfur hindiya gaar ahaan malayalam waxaana lagu magacaaba Urumi.
waxay sameesay filima Telugu 1998 waxayna filimka premante Idera kala muuqatay Venkatesh sidoo kale sanadii 1999 waxay filimka Raja Kumarudu kala soo muuqatay Mahesh Babu.
quruxleyda bollywood-ka Aishwarya Rai sanadii 1997 waxay atariisho ka aheyd filimka tamil-ka ah Iruvar ee hogaamiyaha ka ahaa Mohalaal ka dib Aishwarya waxay sameeysay filimo kale oo koonfur hindiya ah.
5. Kangana Ranaut: sidoo kale waxay ka mid tahay atariishooyinka sameeyay filimada koonfur hindiya ah iyadoo sanadii 2008 sameesay filimka Tamilka ah ee Dhaam Dhoom, Kangana sanadka ku xiga waxay la imaaday filim Telugu ee lagu magacaabo Ek Niranjan waxaana la jilaayay Prabhas.